Jaalala Archives - Page 2 of 3 - Ibsaa Jireenyaa
April 12, 2018 Sammubani One comment
Zinaan (sagaagalummaan) hojii fokkuu ta’ee fi miidha hangana hin jedhamne geessudha. Dubartin akka durbummaa fi kabaja dhabdu, sanyiin akka wal dhayuu taasisa. Dubartiin zinaadhaan yoo ulfoofte hangam salphinni ishii akka haguugu tilmaamun nama hin dhibu. Daa’imni kuni yoo dhalate jireenya akkami akka gaggeessu itti haa xinxallinu. Dhibee gadaa kanaa HIV Eedisiin akka saffisaan babal’atuuf balbala kan banu zinaadha. Read more
Gaafii: Rabbiin (subhaanahu wa ta’aala) Qur’aana keessatti, “Dhiirri zinaa (sagaagalummaa) raawwate dubartii zinaa raawwatte yookiin mushrika taate malee hin fuudhu. Dubartiin zinaa raawwattes dhiira zinaa raawwate yookiin mushrika ta’e malee namni biraa ishii hin fuudhu. Suni warroota amanan irratti dhoorgamee jira.” (An-Nuur 24:3) jechuun dubbata. Akkasumas, hadiisa, namticha zinaa raawwate haddiin (adabbiin) irratti dhaabbame fi dubartii akka isaa malee dubartii qulqulluu fuudhu irraa dhoowwame dhagahee jira. (Haddi jechuun seera adabbii Islaama namni yakkamaan adabamuudha. Fakkeenyaf, dhirri fi dubartiin hin fuune yoo zinaa (sagaagalummaa) raawwatan si’a dhibba (100) reebamu (garafamu)). Read more
July 16, 2017 Sammubani 5 comments
Gaafi fi deebiin kuni websayiti www.islamqa.info irraa fudhatame. Ummata ni fayyada jechuun hanga danda’een gara Afaan Oromootti hiikuf yaale jira. Dubbisa gaarii!
Ani intala umriin koo waggaa 24 ta’eedha. Gurbaa tokko irraa jaalalaan qabame. Garuu bakka tokkotti wal qunnamuuf walii hin beellamnu. Jaalala qulqulluu nama amantii qulqulluu qabu jaalladhe.
December 10, 2016 Sammubani 10 comments
August 20, 2016 Sammubani One comment
Zinaa (sagaagalummaa) jechuun nama tokko waliin osoo seeran wal hin fuudhin wal qunnamti saala waliin raawwachuu jechuudha. Zinaa bakka lamatti qoonne ilaalu dandeenya. Tokko dubartii fi dhiirri hin heerumne/ hin fuune wal jiddutti raawwachu afaan ingiliffaatin ‘Fornication’ isa jedhamu yoo ta’u kan lammataa immoo dubartiin heerumte fi dhiirri fuudhe wal jiddutti seeran ala raawwachu yookiin lamaan keessaa tokko kan hin fuune/heerumne kan fuudhe/heerumte waliin sagaagallummaa raawwatamuudha. Kunis afaan ingiliffaatin Adultery jedhama. Zinaan gosa kamiyyuu fi karaa kaminuu raawwatamu jibbamaa fi fokkuudha. Fokkinnaa irraa kan ka’e Rabbiin akka itti hin dhiyaanne nu akeekachisa. Read more